लोक दोहोरीका राजा राजु परियारले दोहोरी बाटै हाने यस्तो झटारो (भिडियो) - Tufan Media News
लोक दोहोरीका राजा राजु परियारले दोहोरी बाटै हाने यस्तो झटारो (भिडियो)
२४ असार २०७७, बुधबार २०:१०
काठ्माडौ / गायक राजु परियारको उक्त दोहोरी भिडियो हेर्नु भन्दा पहिले उनको थोरै चर्चा गरौं। कुनै समय नेपाली लोकदोहोरीमा राजु परियारको ठूलै साम्राज्य थियो । तर, नाटकीय रुपमा उनको करिअर चम्किदाचम्किदै एकाएक निभ्यो ।
लोकपि्रयताको शिखरबाट उनलाई कसैले फेदीमा हुत्याएको होइन, आफैं चिप्लेका हुन् । लामो अन्तरालपछि फेरि आफूलाई ब्यूझाँउने प्रयत्न गर्दैछन् । फेरि उकालो उक्लिन खोज्दैछन् । के राजू फेरि त्यो शिखर चुम्न सक्लान् त ?
राजुलाई आफ्नो जिन्दगी पहिले जुन लयमा थियो आज पनि त्यही लयमा हिँडेकोजस्तो लाग्छ । त्यसो भए यो बीचमा उनी कहाँ बरालिएका थिए ? उनी दावी गर्छन्, ‘बीचमा रेस्ट लिएको हो । उत्कृष्ट गीतको खोजीमा देश-विदेशमा दौडने क्रममा यसो हुन गएको हो ।’
लामो समयको अन्तरालमा उनले गाएको ‘दरौं सिरुबारी’ गीतले २०७२ मा सर्वोत्कृष्ट लोकगीतको अवार्ड पायो । यही गीतले उनको पुनरागमनको ढोका खोलेको छ । उनकै रचना/स्वर र जयकुमार परियारको संगीत रहेको यो गीतलाई युट्युबमा हेर्ने दर्शक बढिरहेका छन् । यही गीतबाट उनी फूलमा भमरा, मौरी फूलमाथि, मिर्मिरेको घाम, लमजुङ जाने दाइ जस्ता गीतकै राजु परियार हुन् भनेर प्रमाणित गर्न कस्सिएका छन् । उनको पुनरागमनले उनका आफन्त, शुभचिन्तक, लोक गीतप्रेमी हौंसिएका छन् । राजु पनि पुनः स्टुडियोदेखि स्टेजसम्म छाउने सुरसारमा छन् ।
उनको अनुपस्थितिमा धेरै गायक जन्मिए । केहीलाई राजु परियारको विकल्पका रुपमा हेरियो । यसबीचमा धेरैजना ठट्टैठट्टामा यो क्षेत्रमा आएको देखेका छन् उनले । ‘टेलिभिजनमा अनुहार देखाउनु मात्रै ठूलो कुरा होइन,’ उनी भन्छन्, ‘वर्षको एउटा बनाउनुपर्छ तर उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ ।’
त्यसैले त झलकमान गन्धर्व, बिमाकुमारी दुरा, हरिदेवी कोइरालाका सदावहार गीतलाई ‘मिस’ गर्दारैछन् राजु ।
राजुले अहिलेसम्म कति गीत रेकर्ड गराए होला ? उनले गाएका थुप्रै गीत आफैले बिर्सिसकेका छन् । कतिपयले राजुलाई मात्रै गाउन लगाएर आˆनो नाम अगाडि राख्दै एल्बम निकालेका छन् । कतिले त उनको स्वर राखेर नामै उल्लेख गरेका छैनन् । अब हेरौं उक्त दोहोरी भिडियो/
१२ बर्षमा दोहोरी गाएर
दुर्गेश थापाले सकाए आलू
चर्चित गायिका मेलिना राईसँग
आ’फ्नै जीवनमा आधारित यति
पशुपतिमा ला स ज
पूजा शर्माले रू दै